Barlamaanka KMG oo Maanta Dalbaday in Roadmap-ka Lagu Tarjumo Af-Soomaali, Lana Keeno Baarlamaanka | Building Momentum
Barlamaanka KMG oo Maanta Dalbaday in Roadmap-ka Lagu Tarjumo Af-Soomaali, Lana Keeno Baarlamaanka
Muqdisho (Moment Media) Xildhibaanada baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa maanta shir ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho iyagoo ka dooday qorshaha habraaca marxalada kalaguurka “ROADMAP” oo aan weli loo geyn baarlamaanka.
Kulanka maanta oo ay soo xaadireen in ka badan 270 mudane waxaa shir gudoominayey Madoobe Nuunow Maxamed oo 4-tii Janaayo ay xildhibaanadu u doorteen afhayeenka cusub ee baarlamaanka.
Dooda mudanayaasha ay ka yeesheen qorshaha ROADMAP-ka ayaa ku saabsaneyd waxyaabaha ku jira qoraalka roadmap-ka iyagoo sidoo kalana xukuumadda ku dhaliilay inaysan weli baarlamaanka u keenin.
Mudanayaasha ayaa sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed aan loo bandhigin waxa uu yahay roadmap-ka ee ka soo baxay shirkii Sebtembar ka dhacay Muqdisho ee ay waday Qaramada Midoobay gaar ahaan xafiiska UNPOS. Waxayna soo jeediyeen in Af-Soomaali lagu soo tarjumo si dadweynuhu u arkaan waxa uu yahay iyo haddii dani ku jirto.
Gabagabadii kulanka ayaa shir gudoonka Madoobe Nuunow wuxuu ku dhawaaqay in xukuumadda ay deg deg u saoo tarjunto dhamaan qodobada roadmap-ka isla markaana la horkeeno baarlamaanka.
Madoobe Nuunow ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in wax ummada Soomaaliyeed la rabo in lagu dhaqo haddana af Qalaad lagu qoro taasoo uu sheegay inay keeneyso shaki.
Qaar ka mid ah mudanayaashii ka qeybgalay kulanka oo aragtioyahooda aan weydiinay ayaa iyaguna sheegay in xukuumadda ay ka sugayaan inay dalabka baarlamaanka soo jawaabto.
Kulankan maanta ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka ee diidan Shariif Xasan ayaa noqonaya kii saddexaad oo xukuumadda C/weli Gaas looga dalbado inay baarlamaanka keento roadmap-ka taasoo weli xukuumaddu aysan ka jawaabin.